‘संविधान निर्माण भइसकेपछिको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अतिवादको जोखिम र चुनौती अझै रहिरहेको छ । हाम्रा विपक्षी दलहरूले संविधान निर्माणको बेलादेखि नै आफ्नो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूप्रति निरन्तर असहिष्णु र आक्रामक प्रवृत्तिका साथ क्रियाशील रहेका छन् ।
संसदीय पद्धति र आचरणअनुरूप जुन दलको सरकार भए तापनि उक्त सरकारको काम र निर्णयमा उत्साहपूर्ण सहकार्य गर्नुभन्दा दलगत र गुटगत राजनीति भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा आज हामी जनता सामु उभिन गाह्रो भएको छ । अब पनि हामीहरूले आआफ्ना भूल जनतासमक्ष स्वीकार नगर्ने हो भने हाम्रो भोलिका सन्ततिले के सिक्नेछन् हामीबाट ? के हामीले हाम्रो जन्मभूमिलाई यसरी नै आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सधैँ भागबन्डा मात्र गरी आपसी लुछाचुँडी गर्ने हो ? अब पनि हामी जस्तो युवाहरू नजाग्ने हो भने उज्ज्वल भविष्य नेपालको सपना नदेखे पनि भयो ।’ किरणले भनिरहँदा सबै जना उठेर समर्थनमा ताली बजाउँछन् ।
अहिलेको चर्चित युवा नेता किरण । उसले बोलेको हरेक वाक्यमा एउटा देशभक्तिको भावना सुनिन्थ्यो । जसले गर्दा छोटो समयमा नै देशका दिग्गज नेताहरू पनि ऊदेखि डराउन थालेका थिए । अझ भनूँ भ्रष्ट, चाप्लुसी र देशलाई अगाडि लान नभई मात्र आफू र आफ्नाका बारेमा बढी केन्द्रित नेताहरूलाई किरण बाधक भएको थियो ।
टिभीदेखि हरेक पत्रपत्रिकामा उसलाई एउटा आदर्श नेता बनेर प्रस्तुत गरिन्थ्यो । हुन पनि ऊ एउटा इमानदार र देशप्रति मरिमेट्ने व्यक्ति थियो । यस भूमिमा जन्म लिएपछि । धर्तीमाताको गुणलाई हामीले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन भनेर दत्तचित्त भएर अगाडि बढिराखेको थियो किरण ।
आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको लहर ल्याउन युवाहरूको सिर्जनशीलता, सीप र दक्षता विकास गर्दै लाने । महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने । मधेसका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने । भूकम्प पीडितहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नेजस्ता चिप्ला भाषण गर्नुभएको तपाईंले विगत चार वर्षमा प्रगतिको नाममा के गर्नुभयो ? मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आफ्ना नातेदार मात्र पोस्ने कामबाहेक अरू के गर्नुभयो ? छ केही जबाफ ?’ संसद् भवनमा एक सांसद ठूलो स्वर गरेर चिच्च्याउन थाल्छ । जसको समर्थनमा सबै जना डेस्क ठटाएर समर्थन गर्छन् ।
कहिले पो मलाई भनेर जाने हो र कि कहाँ गएकी छ भनेर तँलाई भनूँ ।’ आमा खाना पस्किँदै भन्छिन् ।
गुरुको प्रवचनले त्यहाँ उपस्थित सबै भक्तालुजनको मन, बुद्धि र चेतनालाई परमात्मासित एकाकार गराइदिएको थियो । गुरुको सम्मोहक स्वरलहरीमा तोटक छन्दमा मुखरित हुन पुगेको थियो एक अत्यन्त मनमोहक भजन– ‘प्रभु, त्यो सेतो पछ्यौरीमा रातो दात त लाग्यो । अब म जान्दिनँ त्यस दागलाई पखालूँ कसरी ?’
लेखक : अर्जुन थापा